China 3D 3D Embossed Waterproof Composite WPC Hollow Decking mpanamboatra sy mpamatsy | Lihua
3D Deep Embossed tantera-drano WPC Hollow Decking
Vidiny:2,35 $ / M
Loko:Arina, ravina maple, hazo mena, kafe, sns na namboarina
2.9m, 3.6mor namboarina
Pool filomanosana, valan-javaboary, sns
● Teknolojia vaovao 3D embossing WPC gorodona haingon-trano ivelany, fanatsarana haingon-trano. Teknolojia embossing 3D dia teknika sokitra ambonin-javatra. Ny gorodona tsirairay dia mitovy amin'ny sary sokitra, ary ny tontolon'ny zavakanto sy ny mari-pahaizana dia nihatsara. Ny embossing 3D Classical dia fanatsarana lehibe amin'ny gorodona vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo, izay tsy vitan'ny voasokitra miaraka amin'ny tarika fotsiny fa koa manohana ny soritry ny fiolahana.
● Wpc nentim-paharazana fametahana composit dia mora very voa eny ambonin'ny, decking super embossed manao tsara kokoa noho ny hazo mitambatra mahazatra, dia voajanahary sy manintona kokoa, manalefaka sy mahatohitra tsara kokoa.
● Ilay embossed an'i Lihua Fametahana WPC manana ny tombony rehetra amin'ny fomban-drazana fametahana composit , mbola tazonina izy io: tsy tantera-drano, anti-UV, mahatohitra toetr'andro, miady amin'ny harafesina, fisorohana bibikely, fikojakojana ambany, fiainana serivisy lava sns… Ary ny takelaka misy embossed lalina dia toa mahatsapa kokoa ny hazo voajanahary noho ny fitsaboana 3D embossing an'ny ny ambonimbony.
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.4 Toro marindrano: Midika 73, Min 70
Teo aloha: Fandefasana haingana haingon-trano WPC haingon-trano - Fanoherana ny alàlan'ny UV etona amin'ny rano tsy misy rano WPC Stair Railing - Lihua
Manaraka: 3D embossed hazo tsy may afo plastika fitifirana rindrina WPC rindrina
F1: Inona ny fitsipika famolavolana ny fisehoan'ny vokatrao? Inona avy ireo tombony?
F2: Inona avy ireo fahasamihafana eo amin'ny vokatrao eo amin'ny mpiara-mianatra?
F3: Iza ireo mpiasan'ny R&D anao? Inona avy ireo fepetra takiana?
F4: Inona ny hevitra R&D momba ny vokatrao?
F5: Inona avy ireo famaritana ara-teknika ny vokatrao? Raha eny dia inona avy ireo manokana?
F6: Inona no karazana fanamarinana efa azonao?
F7: Inona no karazana fanamarinana efa azonao?
F8: Iza amin'ireo mpanjifa no efa nandalo ny fanaraha-mason'ny orinasa?
F9: Tahaka ny ahoana ny rafitra mividy anao?
F10: Inona ny fenitry ny mpamatsy ny orinasanao?
fametahana poakaty WPC poakaty
Fandraisana an-tsoratra feno Deep Emboosed
Fanitsiana hazo any ivelany
Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana ivelany WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fitaovana WPC, Fanesorana WPC ivelany, Rihana fametahana WPC,